राधा र कृष्ण बिच गहिरो प्रेम भएता पनि अखेरी किन विवाह गरेनन् ? – Jagaran Nepal
राधा र कृष्ण बिच गहिरो प्रेम भएता पनि अखेरी किन विवाह गरेनन् ?
जब कृष्ण र राधाबीचको प्रेम समाजमा थाहा भयो तब राधालाई घरबाट बाहिर जान रोक लगाइयो । तर कृष्णको बासुरीको धुन सुनेर राधा आफै रोक्न सक्दिनथीन् । यो देखेर घरका परिवारले खाटमा बाँधिदिए । एकदिन पुर्णिमाको रात थियो । राधाले बासुरीको मसिनो आवाज सुनिन, उनलाई आफ्नो शरीर छोडेर उतै जान मन लाग्यो । कृष्णलाई राधाले भोगीरहेको पीडा महसुस भयो, उद्धवको साथमा उनको घरको छतमा चढे ।
गंगाचार्य र उनका शिष्य कृष्णका गुरु थिए । गुरुले कृष्णलाई सम्झाए, ‘तिम्रो जीवनको उद्देश्य फरक छ यसबारेमा भविष्यवाणी भईसकेको छ । तिमी मुक्ति दाता हो । यस संसारको धर्मको रक्षक तिमी हौ । तिमीले उक्त परिवारको केटीसँग तिम्रो विवाह गर्न हुँदैन । तिम्रो एक खास लक्ष्य छ ।’ कृष्णले सोधे, कस्तो लक्ष्य हो गुरुदेव ? यदि तपाईले चाहनुहुन्छ मैले धर्म स्थापना गरौ, के यस अभियानको शुरु अधर्मको साथ सुरु गरु ? तपाई धार्मिकता र साधुवा स्थापित गर्ने कुरा गरु ।
यस्तो अभियानको शुरुवात एक गलत कामबाट भइरहेको छ ?’ गुरु ले भने, धर्मविरुद्ध काम गर्नको लागि तिमीलाई कसले भन्यो ? कष्णले भने, ‘आठवर्ष पहिले जब मलाई ओखलमा बाधिएको थियो, उक्त समय ती केटी मेरो नजिक आएकी थि, तब उसको नजर म माथी परेको थियो ।’
कृष्णले भने, ‘हुँदैन, म बढाइचढाई गरेर बताइरहेको छैन । यो साचो हो ।’ गुरुले फेरी भने ‘तिमी मुक्तिदाता हो । ’ कृष्णल जवाफ दिए, ‘म मुक्तिदाता बन्न चाहान्न । म आफ्नो गाई, मानिस, साथीहरु, पर्वतलाई र उनीहरुसँग रहन चाहान्छु । उसका दिल, शरीरका हरेक कोशिका मेरै लागि धड्कीरहेका छन् । एक पल म बिना उ रहन सक्दिन । एक दिन मलाई नदेखेमा मरे समान हुन्छिन्, उनी पुरै मेरो दिल भित्र बस्छिन्, यदि म टाढा गएमा उनी निश्चित मर्नेछिन् । ’ गुरुले भने, ‘तिमिले सबै घटनाहरु बढाई चढाई धेरै बताइरहेको छौ । ’ कृष्णले भने, ‘मैले बढाएर कुनै कुरा गरेको छैन ।’ भन्दै आफ्नो ढिपी छोडेनन् र उनको सबै कुरा सुनेर गुरुलाई लाग्यो अब कृष्णलाई उनको जन्मको बारेमा सच्चाई बताइदिने समय आयो । क्रमश…